3A Ukomiswa kweRhasi yeNdalo, i-HDS yeNaphtha, Advanced Alumina Clause Catalyst - Gascheme
I-Shanghai Gascheme Co., Ltd. (SGC), umboneleli wezizwe ngezizwe kunye ne-adsorbents. Ethembele kwimpumelelo yezobugcisa kwiziko lethu lophando, i-SGC iyazinikela ekuphuhliseni, ekwenziweni nasekuhambiseni izinto ezincedisayo kunye ne-adsorbents kwiindawo zokucoca, kwimizi-mveliso yepetrochemical kunye neekhemikhali. Iimveliso ze-SGC zisetyenziswa ngokubanzi kuguquko, i-hydrotreating, ukubuyisela umphunga, ukubuyisela isalfure, imveliso ye-hydrogen, igesi eyenziweyo, njl.
I-Catalysts kunye ne-adsorbents abacebisi ekucoceni ioyile, kwiipetroli kunye nasekucoceni igesi yendalo.
I-R & D kwizixhobo (iiZeolites) kunye neethatheli. I-R & D ekusetyenzisweni kokucocwa kweoyile (hydrotreating / hydrocracking / reforming / isomerization / dehydrogenation) kunye nokucokiswa kwerhasi yendalo (igatya / i-TGT).
Iqela leengcali elinamava atyebileyo kwi-R & D kunye nokusebenza ngokusebenzayo kwiimfuno zakho.
Indlela yokuphendula umphezulu (RSM) yayisetyenziselwa ukufundisisa inkqubo ye-nitric acid leaching yenkunkuma Co Mo esekwe hydrotreating catalyst. Injongo yoku ...